Hebrifo 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔde Kɔmaa Hebrifo 8:1-13
Ntamadan no yɛ ɔsoro nneɛma ho sunsuma (1-6)
Apam dedaw ne apam foforo no (7-13)
8 Nea yɛreka ho asɛm no, asɛntitiriw a ɛwom ni: Yɛwɔ ɔsɔfo panyin a ɔte saa,+ na wakɔtena Otumfo no ahengua nifa so wɔ soro+ 2 sɛ obi a ɔsom wɔ kronkronbea+ hɔ ne ntamadan ankasa* no mu; saa ntamadan no, Yehowa* na ɔyɛe, na ɛnyɛ onipa. 3 Na ɔsɔfo panyin biara, wɔpaw no sɛ ɔmfa akyɛde mma, na ɔmmɔ afɔre nso. Enti, na ehia sɛ oyi nso nya biribi a ɔde bɛbɔ afɔre.+ 4 Na sɛ ɔwɔ asaase so a, anka ɔrenyɛ ɔsɔfo+ efisɛ mmarima wɔ hɔ dedaw a wɔde akyɛde ma sɛnea Mmara no kyerɛ no. 5 Ɔsom kronn a mmarima yi de ma no te sɛ nea ɛkɔ so wɔ soro+ no, na ɛyɛ ne sunsuma.+ Ɛte sɛ ahyɛde a Onyankopɔn de maa Mose bere a na ɔrebesi ntamadan no. Ɔkae sɛ: “Hwɛ sɛ wobɛyɛ nneɛma nyinaa te sɛ ne nhwɛso a mede kyerɛɛ wo wɔ bepɔw no so no.”+ 6 Nanso seesei Yesu nsa aka ɔsom adwuma a ɛkorɔn, efisɛ ɔsan yɛ apam a ɛno nso korɔn+ ntamgyinafo.+ Saa apam yi, bɔhyɛ ahorow a ɛkyɛn so na wɔnam mmara kwan so de yɛe.+ 7 Sɛ mfomso biara nni apam a edi kan no ho a, anka ɛho nhia sɛ wɔbɛyɛ apam a ɛto so abien.+ 8 Na onyaa ɔman no ho mfomso, na ɔkae sɛ: “‘Hwɛ! Nna bi reba,’ Yehowa* asɛm ni, ‘na me ne Israel fi ne Yuda fi bɛyɛ apam foforo. 9 Ɛrenyɛ sɛ apam a me ne wɔn agyanom yɛe da a misusoo wɔn nsa dii wɔn anim fii Egypt asaase so+ no. Efisɛ wɔanni m’apam no so; ɛno nti, manhwɛ wɔn bio,’ Yehowa* asɛm ni.” 10 “‘Na eyi ne apam a me ne Israel fi bɛyɛ wɔ saa nna no akyi,’ Yehowa* asɛm ni. ‘Mede me mmara bɛhyɛ wɔn adwenem, na mɛkyerɛw wɔ wɔn komam.+ Na mɛyɛ wɔn Nyankopɔn, na wɔn nso ayɛ me man.+ 11 “‘Na obiara renkyerɛ ne man muni ne ne nua bio sɛ: “Munhu Yehowa!”* Efisɛ wɔn nyinaa behu me, efi akumaa so kosi ɔkɛse so. 12 Na mehu wɔn mmɔbɔ wɔ wɔn nneyɛe bɔne ho, na merenkae wɔn bɔne bio.’”+ 13 Sɛ ɔka sɛ “apam foforo” a, ɛkyerɛ sɛ kan de no ayɛ dedaw.+ Na nea ayɛ dedaw a ɛretwam* no, ɛrebɛyera.+
^ Anaa “nokware ntamadan.”
^ Anaa “ɛrenyin.”